Ikhaya Isaziso seDCMA
Isaziso se-Digital Millenium Copyright Act (DMCA).
KwaLifeBogger, sihlonipha amalungelo abanikazi be-copyright futhi sizosebenzisana nabo ukuqinisekisa ukuthi izinto ezihlukumezanayo ziyasuswa emsebenzini wethu. LifeBogger iqukethe Amaqiniso Wezindaba Zobuntwana kanye ne-Untold Biography Amaqiniso mayelana nebhola. Uma ubona noma imiphi, sicela uthumele i-imeyili enemininingwane efanele yokunakwa kwe- “copyright copyright” nge lifebogger@gmail.com. Sizothatha izinyathelo zokulungisa ngokushesha.
Isaziso se-Digital Millenium Copyright Act (DMCA) sidinga ukuthi noma yisiphi isimangalo sokwephula umthetho sibhalwe phansi futhi sifaka ingxenye elandelayo yolwazi:
Isiginesha esemzimbeni noma ye-elekhtronikhi yomnikazi we-copyright noma umuntu ogunyazwe ukwenza lokho.
Ukuchazwa okuhle komsebenzi onelungelo lobunikazi kuthiwa wephulwe abakwa-LifeBogger.
Ukuchazwa kokuqukethwe okwephula imininingwane nolwazi. Lokhu kufanele kube kwenele ngokunengqondo ukuvumela i-LifeBogger ukuthola okwenziwe.
Imininingwane yakho yokuxhumana ukuze iLifeBogger ikwazi ukuxhumana nawe kalula.
Isitatimende esenziwe nguwe sokuthi unokholo oluhle lokuthi ukusetshenziswa kwento akugunyaziwe ngumnikazi we-copyright
Isitatimende sokuthi imininingwane esesazisweni inembile. Ngaphezu kwalokho, ngaphansi kwezinhlawulo zecala lokuphikisana, ukuthi imininingwane osinikeza yona inembile nokuthi ungumnikazi we-copyright noma ogunyazwe ukwenza oku egameni lomnikazi we-copyright.
LifeBogger ngizokwenza kangcono ukuphendula ku- “zonke izicelo zokuthatha phansi"Okuhambisana nezidingo ze-Digital Millenium Copyright Act (DMCA), neminye imithetho efanelekile yendawo.